China Multifunctional High Pile Knitting Machine Manufacture uye Factory |Morton Machinery
Iwe unoda here kutsvaga nyanzvi yeMultifunctional High Pile Knitting Machine kugadzira yako chaiyo jira rinodiwa?
Tinogona kupa Yepamusoro Precision Multifunctional High Pile Knitting Machine kuti ienderane zvaunoda zvakanyanya.
1.Multifunctional High Pile Knitting Machine Kushandisa ndege aluminium alloy pane chikamu chikuru chemuchina kuti uvandudze kupisa kwekupisa kushanda uye kuderedza simba rekugadzirisa kwekam box.
2.One Stitch Adjustment kutsiva kukanganisa kwekuona kweziso remunhu nekugadzirisa machining, uye kuratidzwa kwechiyero chakarurama nepamusoro-soro yeArchimedean kugadzirisa kunoita kuti nzira yekudzokorora yemucheka mumwechete pamichina yakasiyana-siyana nyore uye nyore.
3.Multifunctional High Pile Knitting Machine inonziwo Multifunctional loop cut knitting machine.
4.specially dhizaini yemakamera tsono uye mapanga, nyore kugadziridza muchina, inogona kugadzirisa dambudziko rechinyakare senge loop kureba muganhu, yakaipa assort yepamusoro uye yakaderera mirwi, un-avhareji ukobvu, yakaipa kuomesa maitiro.Iro jira repamusoro rakadzikiswa nemuchina mumwechete rinogona kuwana hurefu hwakasiyana.
5.Muchina uyu ndeye synthesis yezvinhu mechanics, dynamics, textile musimboti uye ergonomics dhizaini.
6.Multifunctional High Pile Knitting Machine inoratidzwa sechitarisiko chakanaka, chinonzwisisika uye chinoshanda chimiro.
7.Uchishandisa iyo yakafanana indasitiri yepamusoro-yekupedzisira zvinhu uye kunze kwenyika CNC machining, kuve nechokwadi chekuti zvikamu zvinoshanda uye machira anodiwa.
8.Tekinoroji yekutanga yemumba yakaunzwa kubva kuKorea isina jira uye indentation.Iyo ine yakasarudzika triangle ine dhizaini yebanga retsono.Inogona kudzivirira zvinobudirira matambudziko mazhinji echinyakare saka yakachinjika uye yakatwasuka jira jira, isina kuenzana bvudzi uye mutsauko wemavara.
Muchina uyu unoshanda kune zvakarukwa semakemikari fiber silk akateedzana, donje, yakachena shinda yemvere uye superfine fiber.Inogona kuruka marudzi ese eKorea cashmere, senge coral cashmere, carp cashmere, Kirin cashmere, velveteen, sunflower cashmere, Peacock cashmere, bubble cashmere, donje cashmere / fur cashmere, PV mvere, South Korea cashmere, mvere dzemakwai, super-yakapfava. cashmere uye musana wemvere.Izvo zvinoiswa kune zvipfeko, lining, zvekurara, matoyi, Sofa jira, kapeti, gumbeze uye cushion yemotokari.Iwo machira anogona kusangana nekukasira zvinodiwa zvemusika ane flat uye yakafara chinangwa!
Zvakapfuura: Rib Circular Knitting Machine
Zvinotevera: Lower Loop Cheka Vhura Upamhi Jacquard Machine